Ampandehano ny fijerena haingana ao Safari amin'ny fihetsika telo rantsan | Avy amin'ny mac aho
Anisan'ireo fihetsika maro izay nampiavaka ny OS X foana, ny fihetsika amin'ny fampiasana rantsantanana telo izy io dia iray amin'ireo multitouch hadino indrindra ao amin'ny OS X, fa mety ho iray amin'ny mahasoa indrindra ihany koa. Izany no ilazako azy satria ny fampiasana azy io mihoatra ny efa nataontsika dia afaka manavotra antsika amin'ny tsy fandoavana be loatra ny rafitra amin'ny takelaka na varavarankely, amin'izay dia hitahiry ny fitadidiana efa nampiasaina.
Betsaka aminareo no mety tsy mahalala an'io fa amin'ny OS X Yosemite (kinova 10.10.3), la Fomba fiasa haingana ary ny fidirana mivantana amin'ny fihetsika amin'ny paompy misy rantsantanana telo, dia nitarina ihany koa ho any Safari. Ankehitriny, amin'ny fihetsika fanerena amin'ny rantsan-tànana telo dia hahafahantsika mamantatra ny tenantsika ao anaty rohy ary hisokatra ho azy ny pejy amin'ny karazana topi-maso amin'ny alàlan'ny pop-over, izay ahafahantsika mahita ny atiny alohan'ny hanokafana azy. ao amin'ny kiheba vaovao.
Amin'ity fihetsika ity ao anatin'ny Safari, ireo andro izay nanananao kiheba am-polony nanokatra loharanom-pahalalana ary nahatonga ny fitetezana ho somary misafotofoto ihany noho ny tsy nahafantaranay tsara hoe izay ny pejinay voalohany izay nakanay hevitra tamin'ny voalohany no ao aoriany.
Raha te hanana antoka fa manana an'io asa io isika, dia mila mankany amin'ny System Preferences ary mahita fa manana io safidy manaraka io isika, Trackpad> Point ary tsindrio> Fikarohana.
Raha vantany vao navadika io safidy io dia mila manokatra Safari fotsiny ianao ary amin'ny rantsantanana telo dia tsindrio ny rohy rehetra hahitanao hoe ahoana tonga dia asongadin'ny mavo ary miseho ilay varavarankely takelaka voalaza etsy ambony, izay mampiseho ny atin'ny pejin-tranonkala alohan'ny hidirana mivantana aminy.
Etsy ankilany, manome antsika safidy ny manampy ny pejy teo aloha ho ao amin'ny lisitry ny famakiana hijerena azy any aoriana na tsindrio eo aminy, izay hahatonga an'i Safari hanokatra azy amin'ny takelaka vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Mampiasà rantsantanana telo hanehoana ireo topy mason'ny rohy Internet ao amin'ny Safari
Tehirizo ny habaka disk miaraka amin'ny fampiharana Photos amin'ny famonoana kopia mandeha ho azy ao amin'ny tranomboky